Zvakasviba pamusoro pako ne dirtygardengirl | Fu ...
Kuzvimirira Nettle Jessica
ArgenDana - Titanic dildo yakazara i ...
ArgenDana - Kunyange Yakadzika Uye Yakaomarara Wit ...
Ichi chikamu chakanakisa pano chinonzi CHINONYANYA KUKOSHA CHOKWADI, uye unoziva nei? Nekuti yakanyanyisa sezvainogona kuwana. Zvese zvimwe zvinhu zvatiinazvo pane yedu foramu zvakaremara, zvakapusa uye zvakanyatso tsananguro yevanilla kana ichienzaniswa neyemahara yakanyanyisa mavhidhiyo atinawo pano. Iwe wakauya pano uchitsvaga chinhu chakashata zvechokwadi. Vanhu vanoti zvakashata uye hazvina kunaka, asi ndizvo zvakaita uropi hwako. Isu hatikupi mhosva, izvi zvakasviba zvinodiwa, izvo chikamu cheako dhizaini. Saka, ngatitaurei emahara akanyanyisa mavhidhiyo, isu?
Ndeupi mhando yeXX yakanyanyisa zvemukati iwe zvauri pano? Unogona kubheja dhongi rako rine hurombo kuti tinaro pano. Oo, tine zvakawanda zvacho. Zvimwe zvezvinhu izvi zvakasarudzika, zvakabva kune zvakavanzika kuunganidzwa, zvakabva kune vashandisi vedu, zvakabva kune seedy kukoka-chete torrent trackers, mamwe mavhidhiyo akatwasuka kubva kunzvimbo dzine rima dzewebhu dema. Iwe unobata kukukurwa kwedu, handiti? Ndiyo nzvimbo yaunogona kunakidzwa nemavhidhiyo akanyanya eXXUMX sezvawagara uchida, pachave nekuwanda kwazvo, unogona zvakare kuwana kinky nyowani kana maviri. Ndizvozvo, kana iwe uchinyatso, unakidzwa zvechokwadi nekunyadzisira kweXXX, kunyangwe dai wanga uchitsvaga zvinhu izvi kwemazera, iwe uchazowana chimwe chinhu chitsva, chimwe chinhu chingafadze nekukuvhundutsa. Uchave wakazara nekuomarara sedombo, izvo zviviri zvinowanzoenderana, handizvo here?
Kutenda kune ese mushandisi-yakatumirwa zvemukati, nekutenda kune vese vanhu vanoisa zvakanyanyisa pirn zuva mukati uye masikati kunze, unogona kunakidzwa nehukuru kwazvo muunganidzwa wezvinhu zvakawandisa pane internet Iko hakuna kudzokera kumashure kwako, chingotarisana nazvo - hapana chinokutorera iwe seyakaoma sepirn yakanyanyisa. Izvo vanhu vanofunga chaizvo, zvechokwadi "zvakanyanyisa", zvinongoenderana nemunhu. Vamwe vanhu vanoti mayonnaise yakanyanyisa uye vanoda mabhendi akaoma-dombo seColdplay uye Fungidzira Dragons. Pfungwa yedu ndeyekuti, ingo tarisa bhodhi iri kuti uone kuti gomba retsuro rinodzika zvakadii. Iyo "yechokwadi" yakanyanyisa pirn kana kwete, iwe unowana chimwe chinhu chaunofarira.
Usave mutorwa, nakidzwa nekugara kwako. Vanhu pano vane hushamwari, munhu wese ane shungu kwazvo nezve fetis yavo, saka hapana kink-inonyadzisa, zvakanaka? Pamwe iwe unowana dzimwe shamwari nyowani pano, wadii? Boka revanhu vane pfungwa dzakafanana uye vakatendeseka vanhu vakaora, ndizvo chaizvo tsananguro yebhuku yenyaya yerudo mukugadzira. Yakareba nyaya yakapfurwa: nakidzwa, taurirana, pinda, govana, usave nemakaro uye usave dick.